Raha te hianatra anglisy amin'ny fampiharana 5 ianao dia ho mora kokoa | Androidsis
Fampiharana tena ilaina 5 hianarana anglisy amin'ny findainao Android
Io fiteny Anglo-Saxon io izay mamela antsika hanokatra sisintany, mihaona amin'ny namana avy amin'ny firenen-kafa ary manana fidirana amin'ny tsenan'ny asa midadasika kokoa, ankoatry ny tombony ho azy amin'ny fahalalana ny fitsipi-pitenenana amin'ny fiteny hafa. Tsy ny fiteny anglisy no iray amin'ireo fiteny sarotra ianarana indrindra, satria raha mitandrina ny olona iray, ny ankamaroan'ny vokatra teknolojia, lalao video sy andiana serivisy sy fampiharana hafa dia mazàna manana io fiteny io ho fiteny iray lehibe indrindra, noho izany dia azo idirana amin'ny fomba mora hianatra izany raha mila.
Satria io no foto-kevitra mbola andrasana ho an'ny maro, dia hanolotra fampiharana dimy tena mahaliana isika amin'ny fianarana ity fiteny ity na ho an'ny ambaratonga fototra na ho an'ny tena mandroso izay hanampy antsika mandalo ny fitsapana TOEFL, ny hajaina indrindra eto an-tany ary azo antoka fa hanokatra ireo fahafaha-manao matihanina izay tsy noeritreretintsika teo aloha, satria mitaky izany ny ankamaroan'ny orinasa malaza.
5 Mianara fiteny - Rosseta Stone
Es iray amin'ireo fampiharana tsara indrindra hianatra anglisy satria manambatra izay mianatra fiteny iray bebe kokoa izay milalao amin'ny alàlan'ny fampiharana. Voaporofo fa ny iray amin'ireo fomba tsara indrindra hanabeazana ny olona dia amin'ny alàlan'ny lalao ary izany no atao hoe Duolingo, manome ny fahafaha-mianatra amin'ny filalaovana.
Manana izany karazana fanazaran-tena voambolana rehetra, fanononana, fihainoana, matoanteny sy firafitry ny fehezanteny, ary raha misy zavatra mahavita azy dia fampiharana maimaim-poana tanteraka izany. Ka tsy manana fialantsiny tsy hianatra teny anglisy isika raha manam-potoana hanaovana izany. Hita ao amin'ny Android mandritra ny fotoana fohy izao, tsy azonao hadino ny fotoana nifanarahana taminy.
Duolingo - mianatra fiteny
Raha misy fampiharana azo ampitahaina kalitaon'ny etsy ambony io dia Wlingua. Ahitana lesona anglisy 600 avy amin'ny ambaratonga voalohany sy ambaratonga faharoa (A1, A2, B1 ary B2). Izy io dia manana ny mampiavaka ny fahaizana mampiasa ny feo-overs amin'ny anglisy anglisy anglisy sy amerikanina, azo antoka fa raha nanararaotra nihaino ny iray na ny iray hafa teo ianao dia ho fantatrao ny filan'izy ireo.
Ny fahasamihafana lehibe indrindra raha oharina amin'i Duolingo dia ny hoe tsy maimaim-poana tanteraka izy io, satria voafetra voafetra amin'ny voambolana sy fanaingoana fanononana ary, iray amin'ny fandoavana manolotra antsika ny fahafaha-miditra amin'ny atiny rehetra. Izany fandoavam-bola izany dia manomboka amin'ny € 9,99 isam-bolana hatramin'ny € 59,99 isan-taona.
Wlingua - Mianara anglisy
Babble, ankoatry ny mahay mianatra anglisy dia manome ihany koa ny mety hianarana fiteny hafa. Izy io dia manana ny zavatra rehetra ilainao amin'ny fianarana miaraka amina seha-pifaneraserana marobe, fanabeazana, fihainoana ary fanoratana. Ilaina ireo raha te hiditra amin'ny fitsapana TOEFL ny olona, ​​farafaharatsiny mba hanombohana kely alohan'ny hirosoana amin'ny hamafin'ny fitsapana.
Toy ilay teo aloha fandoavam-bola amin'ny fampiharana Mahatonga antsika 9,95 € isam-bolana na € 59,40 isan-taona. Alternative hafa tsara hiatrehana ny Anglisy.
Izy io dia manana endri-javatra tsara ary izy no vondron'olona vazimba goavambe Amin'izay ianao dia ho afaka hampiasa teny anglisy ankoatry ny fahafahanao mandefa fanazaran-tena hanampy anao hahay tsara ity fiteny ity. Toa an'i Babble, manana fiteny maro kokoa izy raha sanatria ka te hanomboka amin'ny teny italianina na frantsay.
Toy ny hafa, manana ny fototra izy io ka afaka manomboka amin'ny teny anglisy ny iray, ary izany amin'ny fampiharana dia mitarika antsika tsy maintsy misafidy iray amin'ireo voalaza amin'ity lahatsoratra ity. Izy io dia manana lalao mahafinaritra sy micropayments hidirana amin'ny fampianarana feno.
Busuu: Mianara Fiteny
Mianara fiteny - Rosseta Stone
Miaraka amin'ny isa iray 4,4 Azontsika atao ny mahatakatra ny fanekena lehibe an'ity fampiharana ity izay mamarana ity lisitry ny dimy ity. Ny zavatra ataontsika, alohan'ny hanohizantsika manazava ny endriny rehetra, aorian'ny fitsapana maimaimpoana dia tsy maintsy andalovantsika ny fizahana, ny zava-mitranga dia fampiharana tsara izy io, ka mety ho iray amin'ireo mahaliana indrindra.
manana teknolojia miteny patanty, fampifanarahana mandeha ho azy miaraka amin'ireo fitaovanao rehetra, fidirana amin'ny fiofanana amin'ny fiteny Rosetta Stone ary ny fahafaha-miditra amin'ny fianarana fiteny maro kokoa raha maniry izany.
Alohan'ny hamaranana dia azonao atao apetraho ity lalao ity for hanatsara ny voambolana anananao, satria amin'ity fomba ity dia azonao atao ny manankarena azy amin'ny filalaovana ity piozila mahafinaritra ity.
Rosetta Stone: Mianara fiteny - anglisy sy frantsay
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fampiharana Android » Fampiharana tena ilaina 5 hianarana anglisy amin'ny findainao Android
Ny Samsung Galaxy Note 5 dia "manamboatra" ny olan'ny S Peno amin'ny sticker (tsy maneso)
Google dia manala ny fampiharana Tasker malaza amin'ny Play Store